Kushambadzira Mapurojekiti maringe nemaNzira | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 2, 2012 Douglas Karr
Vazhinji vevatengi vedu vanoda zvishoma zvekudzidzisazve kana isu tiri mukati mavo. Ivo vakajaira kushanda nevatengesi vavo vekutengesa senge ivo vanotenga zvekutengesa. Ivo vanoda itemize, mutengo uye kubuda. Takaita kushambadza zvirongwa munguva yakapfuura uye isu tinonyara kure navo izvozvi. Kunze kwekunge isu tichikwanisa kutenga purojekiti yekuwana akati wandei manamatiro, isu tinowanzo famba kubva pachibvumirano. Isu, pachinzvimbo, tinoshanda nevatengi vedu nguva dzese kuumba maitiro ekushambadzira.
Dambudziko nderekuti kuitisa kwekushambadzira kwakanyanya, kwakasiyana kwazvo. Iwe hausi kutenga server, urikuumba zano rakavakirwa pane zviwanikwa uye mhedzisiro. Kushambadzira ndeye gadzirira, moto, chinangwa zano. Kuti uwane kunzwisiswa kwekukanganisa kweprojekti yekutengesa, unofanirwa kuita uye kutanga kuona mhedzisiro. Ini handina basa neiyo saiti yekugadzirisa patsva, email email chirongwa, kana chingori infographic dhizaini.
Semuenzaniso, patinogadzira infographics, isu tinopa dhizaini ine chaiyo dhizaini kuratidza mutengi basa rehunyanzvi uye dhizaini. Kana ivo vachichida, isu tobva tapfuura akati wandei kudzokororwa nezviri mukati kuona kuti iri kutaurira iro chairo meseji. Chete kana isu tagamuchira zvizere uye chokwadi chedu chasimbiswa uye chakanyorwa ndipo patinoburitsa infographic. Isu hatizvipamhewo pawebhusaiti yega yega ... tichavhura munzvimbo, kuona kuti tine nzira yekuyera kukanganisa, kutarisa mhedzisiro, tobva tatanga kuzvisimudzira. Yakagadzirira, moto, chinangwa.
Kana isu tichishanda nemutengi pane yavo yekutsvaga injini optimization, isu taizo haana vabvunze kuti vasaine kondirakiti yemamwe mazwi akakosha. Isu tinogadzirisa chikuva uye zvemukati (wakagadzirira), tobva taita zano nekutanga saiti (moto), uyezve tinoona mashandisiro akaita saiti uye kuti ndeapi mazwi akakosha ari kushandura zvakanyanya… uye tinovagadzirirazve (chinangwa).
Isu tinoda misi yakatarwa, asi vaone vachiuya vachienda pamwe neese mutengi. Vazhinji vatengi vanoziva kuti dzimwe shanduko uye zvigadziriso zvichaitika saka zuva rakatarwa harisi rekupedzisira, zvinowedzera nhanho. Vamwe vatengi, zvakadaro, vanoda kudzvanya zuva… ivo vasiri panguva nezviwanikwa kana ivo vachikumbira imwe shanduko… KANA musika unoshanduka uye mushandirapamwe unoda kugadziriswazve. Vamwezve vatengi vanokundwa na 'ol "Ngatirovei mari kubva kumutengesi kuyedza kusvina mari yakawanda kubva muhukama uhwu"… isu tadzidza kudzinga vatengi ivavo.
Kiyi yekubudirira kugadzira yakanaka yekushambadzira maitiro kuti uve anononoka uye kufamba nekukurumidza sezvazvinogona. Yakagadzirira, moto, chinangwa. Yakagadzirira, moto, chinangwa. Yakagadzirira, moto, chinangwa. Ziva kuti zvidimbu zvese zviri kufamba uye zvinoda huremu hwakaomarara kuti uwane zano rekushambadza rinokunda. Kana iwe ukagadzira zano kubva kumberi kuenda kumashure, isa nguva yako yese nemari yako mairi, usingakwanise kugadzirisa zvinoburitswa kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.